Semalt समीक्षा: १ Best उत्तम नि: शुल्क डाटा स्क्र्यापिंग सफ्टवेयर
वेब स्क्र्याप आईएनजी टेक्निक विभिन्न स्क्र्यापिंग उपकरणहरू र डाटा निकाल्ने कार्यक्रमहरू द्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। यी उपकरणहरूले साइटहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ, पहिचान गर्दछ र उपयोगी जानकारी स collect्कलन गर्दछ, र तपाईंको आवश्यकताको आधारमा यसलाई स्क्र्याप गर्दछ। यसका साथै, तिनीहरूले तिनीहरूका डाटाबेसमा स्क्र्याप गरिएको डाटा बचत गर्दछ वा यसलाई तपाईंको कम्प्युटर मेशिनमा डाउनलोड गर्दछ। यहाँ हामीले ईन्टरनेटमा १ best उत्तम वेब स्क्र्यापिंग उपकरणहरूको बारेमा कुरा गरेका छौं।
१ सुन्दर सुप
यो एक प्रसिद्ध पाइथन पुस्तकालय हो जुन XML र HTML फाइलहरू स्क्र्याप गर्नको लागि विकसित गरिएको हो। तपाईंले भर्खर यो वेब स्क्र्यापिंग उपकरण स्थापना र सक्रिय गर्न आवश्यक छ र यसलाई विभिन्न कार्यहरू गर्न दिनुहोस्। तपाईं यसलाई डेबियन र उबुन्टु प्रणालीहरूमा सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यो एक उत्तम डेटा स्क्र्यापिंग उपकरण s हो। यसले हामीलाई दुबै आधारभूत र अग्रिम साइटहरूबाट जानकारी स्क्र्याप गर्न अनुमति दिँदछ र आधुनिक, प्रयोगकर्ता मैत्री ईन्टरफेस छ।
मोजेन्डा एक स्क्रिन स्क्रैपर र डाटा एक्स्ट्र्यासन सफ्टवेयर हो। यसले विभिन्न ढाँचामा सामग्री प्रदान गर्दछ र पोइन्ट-एन्ड-क्लिक स्क्रेपर हो।
यो दृश्य वेब स्क्रैपर हो जुन ईन्टरनेटबाट जानकारी स collect्कलन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईं यस प्रोग्राम प्रयोग गरेर बिभिन्न साइटहरूबाट एपीआई सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।
अक्टोपार्से विन्डोज प्रयोगकर्ताहरूको लागि ग्राहक-साइड वेब स्क्र्यापर र डाटा एक्स्ट्र्यासन उपकरण हो। यसले अर्ध-संरचित वा असंरचित जानकारी परिवर्तन गर्न सक्दछ संरचनाको डाटासेटमा कोडहरूको कुनै आवश्यकता बिना।
यो एक उत्तम नि: शुल्क वेब scraper s, डाटा निकाल्ने कार्यक्रम, र क्रॉलर हो। यसले तपाईंलाई बिभिन्न साइटहरू स्क्यान गर्न दिन्छ र तपाईंको वेब पृष्ठहरूको क्रलि the्ग सजिलो बनाउँदछ।
यो डाटा सम्बन्धित समस्याहरूको अन्तिम समाधान हो। तपाईंले भर्खरै यो प्रोग्राम डाउनलोड गर्न आवश्यक छ, एउटा अनुरोध पठाउनुहोस् र तपाईंको इच्छा अनुसार डाटा स्क्र्याप गर्नुहोस्।
Common. साधारण क्रल
यो क्रल गरिएको वेब पृष्ठहरूको खुला डाटासेट प्रदान गर्न परिचित छ। यसले कच्चा डाटालाई एउटा संरचित र संगठित फारममा बदल्छ, प्रयोगकर्ताहरूको लागि मेटाडेटा निकाल्छ, र बिभिन्न छविहरूबाट जानकारी प्रदान गर्दछ।
यो धेरै सुविधाहरू र गुणहरूको साथ एक स्वचालित डेटा निकाल्ने सेवा हो। यसले तपाईंको कच्चा डाटालाई संगठित फारममा बदल्न र JSON र CSV ढाँचामा नतिजा दिन सक्छ।
१०. सामग्री Grabber
यो ती व्यक्तिहरूको लागि ठूलो हो जुन फरक छवि र भिडियोहरूबाट डाटा स्क्र्याप गर्न चाहन्छन्। यो उद्यमहरूको पहिलो प्राथमिकता हो र तपाईंलाई स्ट्यान्ड-एक्लो वेब स्क्र्यापि alone एजेन्ट सिर्जना गर्न दिन्छ।
यो एक मात्र स्वचालित डेटा स्क्रेपर हो जसले तपाईंको डाटा व्यवस्थित गर्दछ र केहि सेकेन्डमा तपाईंको वेब पृष्ठहरू क्रल गर्दछ। यो विकासकर्ताहरू र प्रोग्रामरहरूको लागि उपयुक्त छ र तपाईंको साइटलाई एपीआईमा बदल्न सक्छ।
१२. डेक्सी। io
यो एसईओ विशेषज्ञहरु, वेबमास्टरहरु, र स्वतन्त्रकर्ताहरु को लागी उपयुक्त छ। यो क्लाउड वेब स्क्र्यापिंग उपकरण भारी डाटाको साथ डील गर्दछ र गुणवत्तामा सम्झौता नगरी यसलाई स्क्र्याप गर्दछ। यसले जाभास्क्रिप्ट सम्बन्धित प्रश्नहरू ह्यान्डल गर्न सक्दछ।
१.. डाटा स्क्र्यापि Stud स्टुडियो
यो दुबै निःशुल्क र प्रीमियम योजनाहरूमा आउँदछ र धेरै वेब पृष्ठहरू, पीडीएफ कागजातहरू, XML र HMTL फाईलहरूबाट जानकारी फसल गर्न मद्दत गर्दछ। यो डेस्कटप अनुप्रयोग विन्डोज प्रयोगकर्ताहरूका लागि मात्र उपलब्ध छ।
१ Easy. सजिलो वेब एक्स्ट्र्याक्ट
यो भिजुअल वेब स्क्रैपर र डाटा एक्स्ट्र्यासन प्रोग्राम शीर्ष ब्रान्ड र स्टार्टअपहरूको लागि उपयुक्त हो। यसमा बिभिन्न अनौठो सुविधाहरू छन् र डाटा बिभिन्न एचटीटीपी फाईलहरूबाट स्क्र्याप गरिएको छ।
यसले तपाईंलाई यसको म्याक्रो रेकर्डरको साथ बिभिन्न परियोजनाहरू निर्माण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ र उत्तम डाटा स्क्र्यापि tools उपकरणहरू मध्ये एक हो। यसले ईमेल ठेगानाहरू र सामाजिक नेटवर्किंग साइटहरूबाट उपयोगी जानकारी निकाल्छ।